Ashampoo Slideshow Studio HD3v3.0.6 Portable Multilingual Full Version | မောင်မင်းသား
Home » Video Editing » Ashampoo Slideshow Studio HD3v3.0.6 Portable Multilingual Full Version
Ashampoo Slideshow Studio HD3v3.0.6 Portable Multilingual Full Version
video Slideshow လုပ်လိုတဲ့သူတွေအတွက်Ashampoo Slideshow Studio HDဆိုတယ်ကောင်းလေးကို ပြန်ရှယ်ထားပါတယ်ေAshampoo Slideshow Studio HD3v3.0.6 Portable
Multilingual လေးတင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ကတင်ပေးဖူးပါတယ် ဒါကြောင့်သုံးဖူးတဲ့လူတိုင်းသိကြမှာပါ အခုဒီကောင်လေးကတော့ update လေးပါ အရင်ကထက် effect လေးတွေ stile လေးတွေ format လေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ 32 bit 64 bit နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီးဝင်းဒိုးအားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။မိမိစိတ်ကြိုက် Slideshow ပြုလုပ်ချင်သည့်ပုံတွေကို ရွေးချယ်ပြီးOpenကို နှိပ်လိုက်ပါလုပ်နည်းကိုကိုယ်ကြိုက်သလိုဖန်းတီးပြုပြင်ပြီးဆက်
Windows® XP, Windows Vista® (32 bit/64 bit)eWindows®7(32 bit/64 bit), Windows® 8 (32 bit/64 bit)
Come utente di Windows® XP, Windows Vista® and Windows®7si deve aver eseguito il login con pieni diritti amministrativi.
Qualsiasi computer sul quale viene eseguitoaragionevole velocità uno dei sistemi operativi di cui sopra.
Masterizzatore DVD per output su DVD.
Masterizzatore Blu-ray per output su Blu-ray.
Posted by mg minthar at 1:06 PM
ဖေ့စ်ဘုတ်စ် သုံးပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်စ်တွက် သင့်မှာဘာတွေလ...
ဘန်နီဖြိုး " လူပျိုလှည့်တေး" MP3
ဖေဘုတ်ပေါ် MP3 တင်နည်း
GridinSoft Trojan Killer v2.2.4.1 + Serial | 48 MB...
CyberLink PowerDVD Ultra v14.0.3917.58-DVT | 141 M...
Photoshop သမားများအတွက် ရှိထားရမယ့် Plug-in တစ်ခု ...
Huawei အသစ်ထွက် Model 16 မျိုး၏ Firmware များ စုစည...
Android ဖုန်းများအတွက် Frozen Keyboard အလန်းလေးမျာ...
အသောက ကွန်ပျူတာ အဘိဓါန်
Screenshots ရိုက်ပြီးချိန်မှာ Edit တစ်ချိန်ထဲပြုလု...
Frozen Keyboard Pro v0.6.0
Call Of Duty Modern Warfare [PC Game]
★★ ScreenHunter Pro 6.0.861 Final + Keys ★★
★★ Advanced Driver Updater 2.1.10 Final + Patch (F...
PhotoSuite3Photo Editor v3.2.314 Patched For And...
★★ Wondershare PDF Editor 3.9.5.5 + Key ★★
Ashampoo Slideshow Studio HD3v3.0.6 Portable Mul...
Andriod Application ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံစာအုပ...
Wifi Key Recover version 1.2